ထ တယ် ဆို တာ ဒါ မျိူးလား – Hlataw.com
ကိုနဲ့ ကျမက ချစ်သူဘ၀မှာ အသန့်ရှင်းဆုံး နေခဲ့ကြတော့ ဆက်စ်ဆိုတာ ဘာမှန်းမသိခဲ့ဘူး…ကို ကကျမထက်အသက်၂နှစ်ပိုကြီးတယ် ကျမပထမနှစ်မှာ သူကတတိယနှစ်ရောက်နေပီလေ…သူကျောင်းပီးတော့ တာချီလိတ်နဲ့ ရန်ကုန်ကို ကုန်ကူးပီး ကျမတို့ မင်္ဂလာဆောင်ဖို့ ပေါင်းဆုံဖို့ စီးပွားရေးကို စောက်ချလုပ်ခဲ့တယ်…ကျမတို့ မင်္ဂလာဆောင်တော့ ကျမလေ ပျော်လည်းပျော် ကြည်လည်းကြည်နူးသလို ရင်တွေလည်းခုန်ခဲ့ရပါတယ်…ဒီလိုနဲ့ မင်္ဂလာဆောင်ပီး လမ်းမတော်က ကို့ရဲ့တိုက်ခန်းလေးကို ၂ယောက်သား ပြန်လာတော့ ဒုတိယထပ်မှာရှိတဲ့ ကို့ရဲ့အခန်းကို တက်ဖို့အတွက် လှေကားမှာ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ ရွှေကြိုးအထပ်ထပ်ကို ရင်ခုန်စွာဖြတ်သန်းခဲ့ကြတယ်… အဲ့နောက် အခန်းကို ဖွင့်လိုက်ပီး အခန်းထဲရောက်တော့ သေသပ်စွာပြင်ဆင်ထားတဲ့ ဧည့်ခန်းလေးကို ကြည်နူးစွာကြည့်နေတုန်း ဗြုန်းခနဲကိုက ပွေ့ချီလိုက်လို့ ကျမလန့်သွားပီး ကို့လည်ပင်းကိုလှမ်းဖက်ပီး အရှက်သည်းစွာ ကို့ရင်ခွင်ထဲ ခေါင်းလေးဖွက်ရင်း ကိုပွေ့ချီရာ အိပ်ခန်းထဲပါလာပါတယ်…အဲ့နောက်ကိုက လှပစွာခင်းကျင်းထားတဲ့ မင်္ဂလာကုတင်ပေါ် ကျမကိုတင်လိုက်ပီး ကြင်နာစွာ နဖူးလေးကို ဖွဖွနမ်းနေစဉ်ပဲ တံခါးထုသံနဲ့ ကို့ကိုအော်ခေါ်နေတဲ့ အသံတွေကြောင့် ကိုစုတ်တချက်သပ်ပီး ခဏနော်ချစ်လို့ပြောပီး အပြင်ကို ထွက်သွားပါတယ် …
ခဏကြာတော့ ကိုပြန်ဝင်လာပီး ချစ်ရေဒီကောင်တွေခဲဖိုးတဲ့ အရက်လိုက်တိုက်ခိုင်းနေလို့…ကိုတအောင့်လိုက်သွားမယ် ချစ်ရောလိုက်အုံးမလားဆိုပီး ပြောလာတော့…ကျမလည်း ခေါင်းကို အသာရမ်းပီးကိုသွားချင်သွားပါ ချစ်တော့မောနေပီ…ရေချိုးအနားယူပီး စောင့်နေမယ်နော် လို့ပြောတော့ …အိုကေ ချစ်ဆိုပီး ကျမရဲ့ပါးနှစ်ဖက်ကို လှစ်ခနဲနမ်းပီး ထွက်သွားပါတယ်…ကျမလည်း တအောင့်ထိုင်နားပီး..ရေချိုးခန်းထဲ ရေချိုးဖို့ အ၀တ်စားတွေချွတ်ပီး တဘက်ကိုပတ်ပီး ၀င်လာခဲ့ပါတယ်…ရေပန်းအောက်မှာ ရေချိုးပွတ်သပ်နေရင်း ဒီနေ့ကြုံရမှာကို ရင်ခုန်စွာတွေးမိရင်း ကျမရဲ့ စပိလေးကို အနံ့ကင်းဖို့ ဆပ်ပြာနဲ့ သေချာပွတ်သပ်ဆေးနေမိတယ်လေ…ရေချိုးပီး တဘက်လေးပတ်ပြန်ထွက်လာတော့ ဗီရိုထဲက ည၀တ်အင်္ကျီနဲ့ အတွင်းခံလေးကို ထုတ်လာပီးမှ…တခုစဉ်းစားမိပီး အတွင်းခံလေးကို ပြန်ထည့်ပီး ည၀တ်အင်္ကျီ တထပ်ထဲဝတ်ပီး လက်ဖွဲ့တွေထဲက သူငယ်ချင်းတွေဟာကို ရွေးဖွင့်ရင်း ကိုပြန်အလာကို စောင့်နေခဲ့တယ်….
ကိုပြန်အလာကိုစောင့်ရင်း ကျမလည်းပျင်းလာတာနဲ့ အခွေကြည့်ရင်းစောင့်ဖို့ တီဗီ နဲ့ အောက်စက်ကိုဖွင့်လိုက်ပါတယ် အောက်စက်မှာဖွင့်လက်စအခွေရှိတာနဲ့ ကြည့်နေတုန်း တီဗီဖန်သားပြင်မှာ ပေါ်လာတာက ကုတင်ပေါ်က ဂျပန်မလေးကို ကပ္ပလီကြီးတယောက်က တွန်းလှဲလိုက်ပီး နို့တွေစို့ စပိလေးကို လျှာကြီးနဲ့ ယက်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ် ကိုရော ဒီညကျမကို ဒီလိုများလုပ်မလားဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ ရင်တွေပိုခုန်လာရပါတယ်…. ကပ္ပလီကြီးက ယက်ပီး ကောင်မလေးစပိထဲကို သူ့လီးမဲမဲကြီးကို ထိုးသွင်းတော့ ကောင်မလေး မျက်နှာကိုရှုံ့မဲ့ပီး အိပ်ယာခင်းစကို ဆွဲလိမ်ပီး နာကျင်စွာအော်နေတာကြည့်ပီး ကြက်သီးများထလာပါတယ်… အဲ့နောက်ကောင်မလေးကို ကပ္ပလီကြီးက ဖြည်းရာကနေမြန်မြန်လုပ်လာတာတွေ့ရပီး ကြည့်နေတုန်း….တံခါးခေါက်သံနဲ့အတူ ချစ်ရေလို့ ခေါ်လိုက်တဲ့ ကို့အသံကိုကြားလိုက်ရလို့ တီဗီ နဲ့အောက်စက်ကို ကပျာကယာပိတ်ပီး တံခါးကို အသာဖွင့်ပေးလိုက်တော့ ကိုဝင်လာပီး ကျမနဖူးလေးကို နမ်းကာ ချစ်စားဖို့ ခေါက်ဆွဲကြော်ဝယ်လာတယ် ကိုတော့ဟိုမှာစားလာခဲ့တယ် ချစ်ဆာနေမှာစိုးလို့ဆိုပြီး ခေါက်ဆွဲကြော်ထုပ်ပေးကာ ကိုရေချိုးအုန်းမယ်နော် ချစ်စားထားနှင့်ဆိုပီး ရေချိုးခန်းထဲဝင်သွားပါတယ်…ကျမလည်း ခေါက်ဆွဲကြော်ထုပ်ကိုယူကာ ပန်းကန် ၂ချပ်မှာ ခွဲထည့်ပီး ကိုထွက်အလာကို ပုဆိုးနဲ့ စွပ်ကျယ်လေးကိုင်ပီး စောင့်နေပါတယ် …
ကိုကထွက်လာတော့ စားပီးပီလားချစ်လို့မေးတော့ ကျမက စားသေးပု ကို့ကိုစောင့်နေတာ တယောက်ထဲမစားချင်ပုဆိုတော့ ကိုက ပုဆိုးနဲ့အင်္ကျီကိုယူပီး ၀တ်လိုက်ကာ ထမင်းစားခန်းထဲဝင်လာပီး ကျမကို ယုယစွာခွင့်ကျွေးခဲ့တယ် …စားသောက်ပီးစီးတော့ ကိုကကျမပခုံးကိုဖက်ပီး အိပ်ခန်းထဲသို့ ၀င်လာရာ ကျမမှာ ရင်ခုန်ချင်းများစွာနဲ့ ပါလာပါတယ်… အိပ်ခန်းထဲရောက်တော့ ကိုကကျမနဖူးလေးကို ဖွဖွလေးနမ်းလိုက်ပါတယ်… ပီးတော့ ကျမပါးလေးကို ဆက်နမ်းတယ် ပီး တော့ကျမနှုတ်ခမ်းလေးကို ငုံစုပ်လိုက်တော့ ကျမရင်ထဲ ရင်ခုန်သံတွေ ပိုညံသွားပါတယ် ကိုက ကျမကိုကုတင်ပေါ် အသာလှဲချပီး ကျမလည်ပင်းလေးတွေ နားရွက်လေးတွေကို ဖွဖွလေးနမ်းလိုက် နှုတ်ခမ်းနဲ့စုပ်လိုက်လုပ်တော့ ကျမအသည်းတွေ ယားလိုက်တာရှင် …အဲ့အချိန်ပဲ ကိုက ည၀တ်အင်္ကျီရဲ့ပခုံးကခေါက်တွန့်ကြိုးလေးကိုဖြည်လိုက်ပီး ကျမရဲ့ပခုံးသားတွေကို နမ်းရှုံ့ရင်း ကို့လက်တွေက ကျမနို့တွေကို မထိတထိ ကလိလာပါတယ် … အဲ့နောက်ကိုက ည၀တ်ဂါဝန်လေးကို အောက်ကို အသာဆွဲချတော့ ကျမလည်း ကျောလေးကော့ပေးမိပါတယ်…
အဲ့နောက်ဝင်းမွတ်စွာပေါ်လာတဲ့ ကျမရဲ့ရင်သားတွေကို ကိုက အပေါ်ကငုံ့ကြည့်လို့ ကျမလည်းအရှက်သည်းစွာ လက်နှစ်ဖက်နဲ့ မလုံ့တလုံကာရင်း မျက်နှာကို တဖက်သို့လွှဲထားမိတယ်လေ …ဒါကိုကိုက ရှက်နေတာလား ချစ်..ရှက်မနေပါနဲ့ကွာ လင်မယားတွေဖြစ်နေပီပဲဆိုပီး ကျမမျက်နှာကို ပြန်တည့်ယူပီး ကျမရဲ့နှုတ်ခမ်းတွေကို ထပ်မံငုံစုပ်လာပီး သူ့ရဲ့လျှာကို ကျမပါးစပ်ထဲထိုးသွင်းလာပါတယ် …ကျမလည်း မျောမေ့စွာ ပြန်နမ်းရင်း ကို့လျှာကို ကျမလျှာနဲ့ပြန်ဖိကြည့်တဲ့အခါ အမည်မဖော်ပြတတ်တဲ့ အရသာတမျိုး ခံစားရပီး ကို့ကိုပြန်ဆွဲယူနမ်းမိနေတဲ့ အချိန် ကို့လက်တွေက ကျမနို့အုံလေးကို ဖွဖွလေးပွတ်လာပီး နို့သီးခေါင်းလေးတွေ လိုက်စမ်းနေတာကို ခံစားမိပါတယ်။ ကို့ရဲ့အနမ်းတွေမှာ ကျမယစ်မူးနေတုန်းပဲ ကိုကအသာခွာလိုက်ပီး ကျမရဲ့ ရင်နှစ်မွှာကြားကို ရူးခနဲနမ်းလိုက်ပါတယ် ….အဲ့နောက်ကျမ နို့သီးလေးကို နှုတ်ခမ်းနဲ့ အသာဖိပီး လျှာနဲ့ကလိတော့ ကျမလေ ကျောတွေပါကော့သွားမိတယ် …ဘယ်လိုအရသာမှန်းမသိပဲ အသဲထဲက စိမ့်ပီးယားလာသလို စပိထဲက အရည်တွေထွက်လာတာ ခံစားမိတယ်လေ…ကိုက လျှာနဲ့ကလိနေရင်း ကျမနို့အုံကို ရသလောက်ပါးစပ်ထဲ ဆွဲစုပ်လိုက်ပီး လက်တဖက်ကကျန်နို့တလုံးက နို့သီးလေးကို ခြေရင်း လက်တဖက်က ချက်လေးကို ၀လုံးရေးနေတာများ ဘယ်လိုမှမနေနိုင်အောင်ပါပဲရှင်…အဲ့နောက်ကိုက နို့တွေကို ဘယ်ညာပြောင်းစို့ရင်း လက်တဖက်က ညှစ်ချေနေတာများ ရင်ထဲတသိမ့်သိမ့်ပေါ့..
.နောက်တော့ကိုက နို့တွေက ခွာပီး အောက်ကိုတဖြည်းဖြည်းဆင်းပီး ကျမဗိုက်သားလေးတွေကို ဖွဖွလေးနမ်းလိုက် ချက်လေးတွေလျှာလေးနဲ့ ကလိလိုက်လုပ်နေပီး ဂါဝန်လေးကို အဆုံးထိချွတ်ပစ်ဖို့ ကြိုးစားတော့ ကျမလည်းရှက်၂နဲ့ တင်ပါးကိုကြွပေးမိတယ်လေ…ကိုက ကျမရဲ့ စပိလေးကို စူး၂ရဲရဲကြည့်ပီး လှလိုက်တာကွာ ချစ်စပိလေးက အမွှေးရိတ်ထားတာလား ချစ်လို့မေးလာတယ်… ကျမလည်း ရှက်ကလည်းရှက် ရင်ကလည်းခုန်နဲ့ ခေါင်းညိတ်မိလားတောင်မသိပုလေ…ပီးတော့ ညနေကကြည့်ထားတဲ့ ကားထဲကလိုများ ကိုလုပ်တော့မလားဆိုပီး ရင်တွေခုန်နေမိတယ်… ရုတ်တရက် ကိုက ကျမဆီးခုံလေးကို နမ်းလိုက်တော့ ကျမရင်ထဲ ဒိန်းခနဲဖစ်ပီး အိုး ကို့ ဆိုပီးအော်လိုက်သလို စပိထဲက အရည်တွေ ထွက်လာတာကိုခံစားမိတယ်…ဒါပေမယ့် ကိုက ကျမထင်သလိုစပိလေးကိုမယက်ပဲ ကျမရဲ့ ဘယ်ဖက်ပေါင်လေးတွေကို ဖွဖွနမ်းပီး လျှာနဲ့ကလိလိုက် ပေါင်တွင်းသားတွေကို လက်ဖဝါးနဲ့ပွတ်လိုက်နဲ့ ကျမကို မယားယားအောင်လုပ်နေတာများလေ….တဖြည်းဖြည်းအောက်ဆင်းသွားပီး ခြေမလေးထိနမ်းပီးမှ တခါ ညာဖက်ခြေမကနေ ပေါင်ရင်းထိ ရွရွလေးတက်လာတများလေ ကျမလေ ထွန့်ထွန့်လူးပီး အိပ်ယာခင်းကို ဆွဲချေမိသည်အထိ…အဲ့ချိန်ပဲ ရှူးခနဲအကိုက ကျမစပိလေး ကိုနမ်းလိုက်တယ်လေ ….လူကိုဘယ်လိုဖြစ်သွားမှန်းမသိပု အသဲထဲအေးစိမ့်သွားတာပါပဲ…ပီးတော့ကိုက ကျမစပိလေးကိုဖြဲပီးစောက်စေ့လေးကိုပြွတ်ခနဲနေအောင် စုပ်ယူလိုက်ပါတယ်…
ကိုရေ ဆိုပီး ကျမလည်းဘလိုဖြစ်သွားလည်းမသိပု…ကိုကတော့ သူ့လျှာနဲ့ ကျမစပိလေးကိုဖြဲပီး ယက်နေတာများလေ ကျမလေ ကို့ခေါင်းကိုကိုင်ပီး ကို့ဆံပင်တွေဖွနေမိတာပဲသိတယ်ကောင်းလိုက်တာရှင် ဘယ်လိုကောင်းမှန်းမသိအောင်ကောင်းတာ…ပီးတော့ ကို့လျှာက ကျမစောက်ခေါင်းထဲထိ တိုးဝင်လာလိုက် ပြန်ထွက်သွားလိုက်နဲ့ ကိုကျမကိုနှိပ်စက်နေတာများလေ ကျမလည်းဘယ်လိုမှ မနေနိုင်ပဲ သေးပေါက်ချင်သလိုလိုဖြစ်လာလို့ ကို့ခေါင်းကိုဖယ်ပေမယ့် ကိုကကော်နဲ့ကပ်ထားသလိုပဲ…ကျမလည်း စိတ်ကိုလွှတ်ချလိုက်ရော စပိထဲက သေးမဟုတ်တဲ့အရည်တွေထွက်သွားတာ သိလိုက်တယ်…လူကလည်း ဟိုးအမြင့်ကြီးကနေ ပြုတ်ကျသလိုခံစားရပီး အရုပ်ကြိုးပျက်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်..အဲ့ကျမှ ကိုက စွပ်ကျယ်အင်္ကျီနဲ့ ပုဆိုးကိုချွတ်ချလိုက်တော့ ကို့ရဲ့ လီးညိုညိုကြီးထွက်ပေါ် လာတာကို မရဲတရဲခိုးကြည့်မိတယ်…အမလေး ကို့ဟာက တကျပ်ခွဲလုံးလောက်တုတ်ပီး ၆လက်မကျော်လောက်ရှည်မယ်ထင်တယ်လို့ စိတ်ထဲကမှန်းကြည့်ရင်း ငါ့ကိုသူလိုးတော့မှာပါလား လို့တွေးမိတယ်…. ကိုလည်း ကျမဒူးခေါင်းတွေကို ထောင်ပီးသူ့လီးကို ကျမစပိရဲ့အ၀ကိုတေ့လိုက်ပါတယ် ကျမလည်း ရှက်၂နဲ့မျက်စိစုံမှိတ်ပီး ရင်ခုန်နေတာပေါ့ရှင် သူ့ဟာဝင်လာရင် ဘယ်လိုနေမလဲ နာသွားမလားဆိုတဲ့အတွေးတွေနဲ့ ကာမဆိပ်တွေတတ်နေတာတော့အမှန်ပဲရှင့်…
ဒါပေမယ့်ကိုက တခါထဲမသွင်းပဲ ကျမစပိအကွဲကြောင်းတိုင်း လီးကိုပွတ်ဆွဲလိုက်တယ် အား ဘယ်လိုဖြစ်လဲမသိပု ကို့ရဲ့ဒစ်က ကျမစောက်စိလေးကိုပွတ်ဆွဲ ခလုတ်တိုက်သွားတာများ ခံလို့ကောင်းပီး စပိထဲက အရည်တွေကျလာသလို ကျမလည်း တဟင်းဟင်းနဲ့ ကိုရယ် ဘယ်လိုတွေလုပ်နေတာလဲဆိုပီး မေးမိသည်ထိပဲလေ…အဲ့အချိန်ပဲကိုက သူ့လီးကို ကျမစပိထဲ အသာထိုးသွင်းလိုက်တယ် စပိထဲက အရည်တွေပဲကြောင့်လားမသိပု နာကျင်မှုမရှိလှပုရှင့်…ကိုက သူ့လီးကိုတရစ်ချင်းထိုးသွင်းလာတာ တ၀က်လောက်ရောက်တော့ ရပ်သွားတယ် သူအဲ့တ၀က်လောက်နဲ့ပဲ အထုတ်အသွင်းလုပ်နေတာ ၂မိနစ်လောက်ရှိမယ် အဲ့လိုလုပ်နေရင်းကိုက ကျမအပေါ်မှောက်ချပီး ကျမနားရွက်လေးတွေကိုကလိနေရင်း လီးကိုအသာပြန်သွင်းလိုက်ပီး ပြန်ထုတ်လိုက် ကျမနားရွက်ကို ကလိနေရင်းက နားရွက်ကို ဆတ်ခနဲကိုက်လိုက်သလို တချိန်ထဲ လီးကိုဆောင့်ထိုးလိုက်တာ ကျမလည်း ဘယ်ကနာလို့နာမှန်းမသိပေမယ့် စပိထဲပြည့်သိပ်နေတဲ့ လီးအရသာကြောင့် ဖီးတွေတက်ပီး အရည်တွေပိုကျလာတယ်လေ ကိုက ကျမနှုတ်ခမ်းတွေကိုနမ်းရင်း အသာလေးဆောင့်ပါတယ် ကျမလည်း ဒူးထောင်အနေထားကနေ တင်ပါးတွေပါကြွလာပီး ပေါင်နဲ့ကိုယ်လုံးကပ်သည်အထိ ကြွတက်လာပါတယ်
ကို့ပါးနှစ်ဖက်ကိုကိုင်ပီး နမ်းလာတဲ့ ကို့ရဲ့နှုတ်ခမ်းတွေကိုလည်း ကြမ်းကြမ်းပြန်နမ်းမိပါတယ် ကိုကလည်း ဆောင့်ချက်တွေမြန်လာပီး ကျမလည်းတော်တော်ကောင်းလာတယ်ရှင့် နောက်၁၀ချက်လောက်ဆောင့်အပီး ကိုကကျမ အပေါ်မှောက်ချ လီးကိုကျမထဲတဆုံးစိုက်ချလိုက်တဲ့အချိန်တော့ ကျမလေ ကို့ရဲ့ကိုလုံးကို တင်းတင်းဖက်ပီး ကို့လီးထဲက လီးရည်တွေကျမ စပိထဲဝင်လာသလို ကျမစပိထဲက အရည်တွေဟာလည်း အပြင်ကိုထွက်ပီး ကျမစပိထဲကနေ ကို့လီးကို ညှစ်ပီး ကို့လီးက လီးရည်တွေကုန်အောင် ညှစ်ယူတဲ့အချိန်မှာ ကိုက ကောင်းလိုက်တာ ချစ်လေးရာတဲ့ အရမ်းချစ်တာပဲတဲ့ ကျမလည်း မရှက်တမ်း ချစ်လည်းအရမ်းကောင်းတာပဲ ကိုရယ် ချစ်လည်း ကို့ကိုချစ်တယ်လို့ ပြောပီး အမောဖြေနေမိပါတယ် ခဏကြာတော့ကိုက လာချစ်ရေသွားဆေးကြမယ် ဆိုပီး ကျမကိုတွဲကာခေါ်လာပီး ရေချိုးခန်းထဲရောက်တော့ ကျမကိုစောင့်ကြောင့်ထိုင်ခိုင်းပီး ကိုကိုတိုင် ကျမစပိလေးကို ရေဆေးပေးတယ်လေ ကျမလည်း ရှက်ကြည်နူးလေးခံစားရင်း ကိုကသူ့လီးကို ဆေးမို့လုပ်ချိန်မှာ ကျမကပဲ ရေပန်းကိုယူပီး ကို့လီးကိုကိုင်ဆေးပေးလိုက်တယ် ကို့လီးကိုကိုင်လိုက်ချိန်မှာ ရင်ထဲ တမျိုးခံစားလိုက်ရတယ် ကျမဘ၀မှာ ပထမဆုံးယောက်ကျားလီးကို ကိုင်ဖူးတာလေ ကျမလည်းကို့လီးကို သေချာရေဆေးပေး ပွတ်ပေးနေတုန်းပဲ ကို့လီးက ပြန်မာလာတယ်ရှင့် ရှင်တို့ပြောပြောနေတဲ့ တောင်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးမလား။…. ပြီး